Pita Nke Mbụ 3:1-22
Ndị nwunye na ndị di (1-7)
Ka ihe banyere ndị ọzọ na-emetụ unu n’obi, na-achọkwanụ udo (8-12)
Mmadụ ịta ahụhụ maka na ọ na-eme ihe dị mma (13-22)
Jikerenụ ịza ajụjụ gbasara ihe mere unu ji nwee olileanya unu nwere (15)
Baptizim na ezigbo akọnuche (21)
3 Ndị nwunye, sikwanụ otú ahụ na-edo onwe unu n’okpuru ndị di unu,+ ka ọ ga-abụ, ndị nke na-anaghị eme ihe okwu Chineke kwuru hụ otú unu si akpa àgwà, ha nwere ike mewe ya+ n’agbanyeghị na unu ezighị ha ozi ọma, 2 ebe ọ bụ na ha hụrụ àgwà ọma unu na-akpa+ nakwa otú unu si na-akwanyere ha ezigbo ùgwù. 3 Ka ihe kacha unu mkpa ghara ịbụ ịchọ mma elu ahụ́, ya bụ, ịkpa isi na iyi ihe ndị e ji ọlaedo mee+ ma ọ bụ iyi uwe mara mma. 4 Kama ka ọ bụrụ ịchọ obi unu* mma nakwa ịgba mbọ ka unu bụrụ ndị obi ruru ala na ndị dị nwayọọ.+ Ọ bụ ya ka Chineke na-anaghị eji egwu egwu. Ụdị ịchọ mma a anaghịkwa emebi emebi. 5 Otú ahụ ka ụmụ nwaanyị ndị dị nsọ n’oge ochie, ndị tụkwasịrị Chineke obi, si chọọ onwe ha mma, na-erubekwara ndị di ha isi. 6 Otú ahụ ka Sera si na-erubere Ebreham isi, na-akpọkwa ya “onyenwe m.”+ Unu bụ ụmụ Sera ma ọ bụrụhaala na unu ana-eme ihe dị mma, gharakwa ịtụ egwu.+ 7 Ndị di, na-emesonụ ndị nwunye unu ihe otú na-egosi na unu na-echebara ha echiche. Ebe unu na ha ga-eketa+ ndụ Chineke na-enye ndị o meere amara, na-akwanyerenụ ha ùgwù+ maka na ha dị ka arịa na-esighị ike. Ma ọ́ bụghị ya, Chineke agaghị na-anụ ekpere unu. 8 N’ikpeazụ, unu niile nwee otu obi.+ Ka ihe banyere ibe unu na-emetụ unu n’obi. Hụnụ ibe unu n’anya ka ụmụnne. Na-enwenụ obi ebere,+ dịrịkwanụ umeala n’obi.+ 9 Unu ejila ihe ọjọọ akwụ ụgwọ ihe ọjọọ,+ unu ejikwala mkparị akwụ ụgwọ mkparị.+ Kama, na-agọzinụ ndị mmadụ,+ n’ihi na Chineke họọrọ unu ka unu na-agọzi ndị ọzọ, ka yanwa wee gọzie unu. 10 N’ihi na “onye chọrọ ịdị ndụ, chọọkwa ịna-enwe obi ụtọ ná ndụ, ekwesịghị iji ọnụ* ya na-ekwu ihe ọjọọ+ ma ọ bụ jiri ọnụ* ya na-aghọ aghụghọ. 11 Ya hapụ ihe ọjọọ,+ mewe ezi ihe.+ Ya na-achọ udo ma gbalịa na-eme udo.+ 12 N’ihi na anya Jehova* dị n’ebe ndị ezi omume nọ, ntị ya na-anụkwa arịrịọ ha na-arịọsi ya ike.+ Ma Jehova* na-ajụ ndị na-eme ihe ọjọọ.”+ 13 N’eziokwu, ònye ga-emerụ unu ahụ́ ma unu jiri obi unu niile na-eme ihe dị mma?+ 14 Ma ọ bụrụgodị na unu ataa ahụhụ n’ihi na unu na-eme ihe dị mma, unu ga-enwe obi ụtọ.+ Ma, ka ihe na-atụ ndị ọzọ egwu ghara ịtụ unu egwu,* obi amapụkwala unu.+ 15 Kama jirinụ obi unu kweta na Kraịst bụ Onyenwe anyị nakwa na ọ dị nsọ. Jikerekwanụ mgbe niile ịza mmadụ ajụjụ gbasara ihe mere unu ji nwee olileanya unu nwere. Ma medanụ obi ma unu zawa ya onye ahụ,+ kwanyekwaranụ ya ezigbo ùgwù.+ 16 Na-agbanụ mbọ ka unu nwee ezigbo akọnuche,+ ka ọ ga-abụ, ndị mmadụ kwuwe okwu ọjọọ gbasara unu, ihere emee ha+ maka àgwà ọma unu na-akpa n’ihi na unu na-eso ụzọ Kraịst.+ 17 Ọ bụrụ na Chineke ekwe ka unu taa ahụhụ maka na unu na-eme ihe dị mma,+ ọ dị mma karịa na unu na-ata ahụhụ maka na unu na-eme ihe ọjọọ.+ 18 Kraịst, bụ́ onye ezi omume, nwụrụ naanị otu ugboro n’ihi ndị mmehie+ ka o duga unu ebe Chineke nọ.+ Ọ bụ mmadụ mgbe ọ nwụrụ,+ ma ọ bụ mmụọ mgbe e mere ka ọ dị ndụ.+ 19 Ọ bụkwa mmụọ mgbe ọ gara gwa ndị mmụọ ozi a tụrụ mkpọrọ ikpe a mara ha.+ 20 Ndị mmụọ ozi a nupụrụ isi n’oge Noa.+ N’oge ahụ, Chineke nwere ndidi, cherekwa mgbe a nọ na-arụ ụgbọ+ Noa. E ji ụgbọ ahụ buru mmadụ ole na ole, ya bụ, mkpụrụ obi asatọ,* gafee mmiri ahụ n’enweghị ihe mere ha.+ 21 Baptizim, nke ya na ihe a yiri, na-azọpụtakwa unu ugbu a n’ihi na a kpọlitere Jizọs Kraịst n’ọnwụ. Baptizim abụghị ịsachapụ unyi dị n’ahụ́, kama ọ bụ arịrịọ mmadụ na-arịọ Chineke ka o mee ka o nwee ezigbo akọnuche.+ 22 Jizọs gara eluigwe. Ọ nọ ugbu a n’aka nri Chineke.+ Chineke mekwara ka ọ kara ndị mmụọ ozi na ndị na-achị achị na ndị dị ike.+
^ Ma ọ bụ “ụdị mmadụ unu bụ.”
^ Na Grik, “ire.”
^ Na Grik, “egbugbere ọnụ.”
^ O nwere ike ịbụ, “unu atụla ụjọ maka ụjọ ha na-achọ imenye unu.”
^ Ma ọ bụ “mmadụ asatọ.”